U-Anamika Khanna Uvula iLakme Fashion Week x FDCI - Izindaba Zemfashini
U-Anamika Khanna Uvula i-FDCI x I-Lakme Fashion Week
Umsiki wengqephu u-Anamika Khanna uvule iLakme Fashion Week ngokubambisana neFashion Design Council Of India. I-extravaganza yemfashini yezinsuku ezinhlanu ye-phygital izoba nenqwaba yemibukiso ebonakalayo yabasiki bengqephu abahlonishwayo nabakhuthazayo. I-Anamika Khanna's 'Timeless World' kwakuyiqoqo lamaphupho elinokuthinta kwesimanje okuveza ukungaphelelwa yisikhathi kwefa lethu laseNdiya.
Njengoba siqhubekela phambili, imvamisa, okusha kuyamukelwa ngenkathi okwedlule kushiywe ngemuva. Iqoqo lomklami libonisa imiklamo eyiqiniso ephefumulelwe yifa lethu elicebile, kufaka phakathi imifino ehlukahlukene ehlaba umxhwele esetshenziswe kakhulu kuma-ensembles abesilisa nabesifazane, kusuka kuma-kurtas angenamkhawulo kuya kuma-sherwanis avulekile kanye namahembe ahlelekile, okwakuthi, kwesinye isikhathi, ahlanganiswe nama-cropped amabhulukwe noma amaphijama oketshezi, anezikhafu ezinezela ebuhleni bokubukeka. Amasentshisi ahlotshisiwe namaphethelo kanye nentshisekelo ehlotshisiwe yanika izidalwa ukunambitheka komkhosi, okwakhuphula imizwa yombukiso futhi kwayenza yamangaza ngokukhaliphile.
Izitayela eziningi ezintsha, ubujamo obungenamkhawulo nokuqhuma kwemibala ekhanyayo exutshwe nemibala ehlale ithembekile yemonochromatic yenze ukuqoqwa kube okuguquguqukayo futhi okungenamkhawulo, okunikeza ama-fashionistas ithuba lokuxuba futhi aqondise izinketho ezahlukahlukene. Iqoqo lobukhosi lomklami lihlonipha ubuciko bezindwangu eNdiya nakubantu abasebenza kanzima abagcina isiko liphila futhi benza ukuqoqwa kuphile. Ngomlayezo othi 'okwenziwayo kuzobhubha ngolunye usuku', imiklamo kaKhanna ingumfanekiso wefa elisele ngemuva kokuthi konke sekulahlekile, ngakho-ke umuntu kufanele alisebenzise kakhulu uma nje lizoqhubeka.
Sishaqekile ngokuphelele iqoqo lika-Anamika Khanna eliphuphayo futhi asikwazi ukulinda ukukubonisa wonke umlingo awudalile ngemiklamo yakhe.
Nakhu ukuhlanganiswa kokubukeka okudonsa amehlo kakhulu nezitayela ezibonwe embukisweni wesonto lezemfashini lomklami.
I-patchwork eningiliziwe emiklamweni yenza ukuqoqwa kubukeke njenge-regal. U-Anamika Khanna uphefumulelwe ukuhlanganiswa kwemibala egqamile, ebamatanisa ne-monochromatics engathembeki njalo nokuqhuma okuphuzi nelanga kwamakhorali ukwenza ukuhlangana kuphawuleke kakhulu.
Ukuhlanganisa ukungaphelelwa yisikhathi kwamagugu aseNdiya nge-twist yesimanje, iqoqo lifaka izinhlobonhlobo zezithombe ezivela kuma-kurtas asymmetric kuya kuma-dhotis asikiwe kanye nama-lehengas aqhakazile ngokuqhuma okucebile okuphuzi okuphuzi nemifino ye-neon.
Ama-Kaftans Apendwe Ngezandla
Ama-kaftan apendwe ngesandla ama-Breezy ku-blues opholile nemifino aletha imizwa emisha eqoqweni lomklami, okwenza kube okuguquguqukayo okuningi futhi okulandelanayo esizukulwaneni sanamuhla.
Imiphetho nemiphetho kufafazwa kuzo zonke izingubo, kanti inzalo ehlombe ehlotshisiwe inika indalo ukunambitheka komkhosi. Amachashazi afekethisiwe ahlanganiswe nepop ephuzi aphakamisa ubukhulu bokubukeka.
Isigqoko segolide esichichimayo namacici kuletha umuzwa wobukhosi nowasebukhosini eqoqweni futhi ugcwalise izingubo zomklami. Le mihlobiso emisha yayingabaphangi abaphelele futhi yenza ukubukeka kube okungajwayelekile futhi kube yiqiniso.
Funda futhi: Iqoqo likaGaurav Gupta le-SS21 Couture Is All Things Luxe And Dreamy
amathiphu okuzenzela wokuwa kwezinwele
kungavimba kanjani ukuwa kwezinwele